Farmaajo oo faah faahin ka bixiyay waxyaabaha uu ku xushay Ra’iisal Wasaaraha cusub – STAR FM SOMALIA
Farmaajo oo faah faahin ka bixiyay waxyaabaha uu ku xushay Ra’iisal Wasaaraha cusub
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Somaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa ka hadlay waxyaabaha uu ku doortay Ra’iisal Wasaaraha cusub ee dalka Xasan Cali Khayre oo sugaya in Baarlamaanka Somaliya ay ansixiyaan.
Farmaajo oo Saxaafadda la hadlay saaka aroortii markii uu magacaabaayay Ra’iisal Wasaaraha cusub, ayaa sheegay inuu ku xushay Xasan Cali Khayre Aqoontiisa, Kartidiisa iyo inuu yahay qof ay wada shaqeyn karaan.
“Kadib markii muddo dheer doorashooyin lagu jiray waxaa ii cadaatay inaan magacaabo Xasan Cali Khayre inuu dalka ka noqdo Ra’iisal Wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shaqsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo Khibrad ahaan anigoo arkay inaan wada shaqeyn karno, bacdamaa dalkaan muddo dowladii timaadaba isbedelkeeda uu badnaa, waxaan go’aan ku qaatay inaan magacaabo anigoo og inaan wada shaqeyn doono uuna yahay shaqsi nadiif ah, fekerkeyga iyo hiigsigeygana ku shaqeyn doona.” Ayuu Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa ka codsaday Golaha Shacabka Somaliyed inay ansixiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan si uu guto waajibaadkiisa.
Farmaajo ayaa sheegay inuu fursad u haystay muddo 30 cisho ah magacaabista Ra’iisal Wasaaraha cusub ee dalka, balse in ka yar uu ku magacaabay oo 16 cisho ah, isaga oo sheegay inuusan dooneyn waqti dambe uu ka khasaaro dalka sida uu yiri.
“Waxaan ka codsanayaa Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Golaha Shacabka inay ansixiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadii Alle Idmo, si uu u guto waajibaadkiisa, aniga waxaan haystaa muddo 30 cisho inaan ku soo magacaabo maanta waa maalintii 16-aad ma doonaayo dalka inuu waqti dambe ka Khasaaro.” Ayuu yiri Farmaajo.
Wuxuu intaasi hadalkiisa ku daray Madaxweyne Farmaajo “Isagana waxaan ku boorinayaa marka la ansixiyo inuusan ka badan muddo 15 cisho ah inuu Xukuumadda ku soo dhiso.”
Puntland oo ka hadashay magacaabista Ra’iisal Wasaaraha cusub
Ra’iisul Wasaaraha la magacaabay Kheyre oo sheegay in si dhaqso ah uu ku soo dhisi doono dowlad(Daawo)